July | 2016 | TAJBIJ.COM
सरकार निर्माणमा सहयोग गर्न राप्रपा नेपाललाई प्रचण्डको आग्रह !
काठमाडौ, २०७३ साउन १६ । नेपाली काँग्रस संग मिलेर आफनो नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउने तयारीमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आज राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापालाई भेटेका छन् । दुई नेताहरुवीच पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका सम्बन्धमा विस्तृत छलफल भएको बताईएको छ ।
भेटका अवसरमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले सरकार निर्माणमा सहयोग गर्नका लागि राप्रपा नेपालका अध्यक्ष थापालाई प्रस्ताव गरेको राप्रपा नेपालका सहप्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले बताएका छन् ।
केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले राखेको प्रस्तावको प्रत्युत्तरमा अध्यक्ष कमल थापाले यस सम्बन्धमा पार्टीमा छलफल गरी जानकारी दिने बताएको पनि राप्रपा नेपालव्दारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
म्याग्दी शिखमा घर भत्किदा पुरिएर एक बृद्धको मृत्यु !
म्याग्दी, २०७३ साउन १६ । म्याग्दी जिल्लाको शिख गाविस २ टोँड्केवासका ८६ वर्षिय आईत सिँह दमाईको आफनै कच्ची घर भत्किएर पुरिँदा मृत्यु भएको छ भने उनकी श्रीमती ८३ बर्षिया रुपा दमिनी गम्भीरघाईते भएकी छिन् । घर भत्किदा करीब ७ लाख रुपयाँको नोक्सानी भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
अविरल वर्षाका कारण आईतसिँहको कच्ची घर शनिवार भत्किएको थियो । घाईते बृद्धाको जिल्ला अस्पताल बेनीमा उपचार भैरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
यसैवीच म्याग्दी दाना–९ गुइठेपानीमा बर्षाको कारण शुक्रबार शान्ती परियारको घर चर्किएर बस्न नमिल्ने भई क्षति भएको छ । परिवारका सदस्यहरु आफन्तको घरमा गई बसेका छन् भने घर चर्कने क्रममा सोही ठाउँ बस्ने राजकुमारी वि।क।की छोरी ४ वर्षीया मन्जु वि।क। ढुङगाले लागेर गम्भीर घाइते भएकीले उपचारको लागि जिल्ला अस्पताल लगिएकोमा मणीपाल अस्पताल पोखरा रिफर गरिएको छ ।
बोवाङमा खोलाले बगाएर एक युवक र एक बालिका बेपत्ता !
बागलुङ (बुर्तिवाङ) २०७३ साउन १६ । बोवाङ गाविसमा एक युवक र एक बालिका खोलाले बगाएर बेपत्ता भएका छन् । स्थानीयको सहयोगमा दुबैको खोजी कार्य भैरहेको प्रहरीले जनाएकोछ ।
यसरी खोलाले बगाएर बेपत्ता हुनेमा अधिकारीचौर गाविस ५ छ्यांगचुंग बस्ने ४२ वर्षिय जुनबहादुर विक रहेका छन् । उनलाई बोवाङ गाविस ९ ढोर स्थित नवी खोला तर्नेक्रममा चिप्लिदा बगाएको थियो ।
यसैगरी बोवाङ गाविस ४ बस्ने यमकुमार कायस्तकी ७ वर्षिया छोरी मुना कायस्त शुक्रवार स्कूल पढन जाने क्रममा स्थानीय मसाल खोलाको काठेपुल तर्न लाग्दा खसेर खोलाले बगाएर बेपत्ता भएकी हुन् ।
मनहरीमा दुई बस ठोक्किदा ९ जना यात्रुको मृत्यु, ४ गम्भीर !
काठमाडौ, २०७३ साउन १६ । आईतबार विहान सबेरै मकवानपुरको मनहरीमा दुई बस एकापसमा ठक्कर खाँदा ९ जनाको मृत्यु भएको छ ।
पुर्व काकडभिट्टाबाट काठमाडौ आईरहेको ना ५ ख ४०६४ को यात्रुवाहक बस र काठमाडौँ देखी गाईघाट जाँदै गरेको ना ५ ख ५०५५ नम्वरको यात्रुवस मनोहरी रमनटारमा ठोक्किएर दुर्घटना हुँदा ६ जनाको घटनास्थलमै र अन्य ३ जनाको उपचार गर्न लैजादै गर्दा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । घाईते मध्य चार जनाको अवस्था गम्भीर रहेको र घाइते ३१ जनाको हेटौंडामा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।